Doorka ugu weyn ee Haweenka ee Dhaqanka Nabadda - Ololaha Caalamiga ah ee Waxbarashada Nabadda
Danjire Chowdhury oo guddoominaya Golaha Ammaanka ee Qaramada Midoobay. (Sawirka: peacexpeace.org)
Waxaa qoray Danjire Anwarul K. Chowdhury
(Qaybta 2 ee 2. Helitaanka qaybta 1 halkan)
(Maqaalka asalka ah: Wakaaladda Wararka ee Inter Press Service. Sebtembar 7, 2016)
Danjire Chowdhury waa Guddoomiyaha Guddiga Qarxinta Golaha Guud ee Qaramada Midoobay ee Baaqa iyo Barnaamijka Waxqabadka Dhaqanka Nabadda (1998-1999).
QARAMADA MIDOOBAY, Sebt 7 2015 (IPS) - Xaqiiqda kale ee si gaar ah uga soo baxaysa dhaqanka nabadda ayaa ah in aynaan marnaba illoobin marka dumarka - kala bar toddobada bilyan ee adduunka oo lagu daray dadka - la faquuqo oo sinnaantoodu aysan ku dhisnayn dhammaan dhinacyada waxqabadyada aadanaha, ma jirto fursad adduunkeenna si loo helo nabad waarta dareenka dhabta ah.
Sawir Waxaa iska leh Danjire Chowdhury
Waxaan ku celcelin lahaa in gaar ahaan haweenku ay kaalin weyn ku leeyihiin horumarinta dhaqanka nabadda ee bulshooyinkeenna ay rabshaduhu ka jiraan, si markaa loo helo nabad waarta iyo dib-u-heshiisiin. In kasta oo haweenku inta badan yihiin dhibbaneyaasha ugu horreeya ee iskahorimaadyada hubaysan, haddana waa inay sidoo kale mar walba u aqoonsadaan inay fure u yihiin xallinta khilaafka.
Waxaan aaminsanahay aniga oo aad u qiraya in nabad la’aan, horumar uusan suurtogal ahayn, horumar la’aan, nabad la gaari karin, laakiin haween la’aan, nabad iyo horumar midna lama xaqiijin karo.
Xiriir isku dhafan oo u dhexeeya horumarka iyo nabadda
Dunida maanta waxaan sii wadnaa inaan aragno is -qabqabsi soo jireen ah oo u baahan feejignaanteenna. Geedi socodkii caalamiyeynta wuxuu abuuray isbadal aan ka noqosho lahayn oo ku wajahan bulsho isku dhafan oo caalami ah, isla mar ahaantaana, kala qaybsanaanta iyo kalsooni darradu waxay u sii muuqdaan siyaabo kala duwan oo adag.
Kala -duwanaanshaha iyo sinnaanla'aanta ka dhex jirta ummadaha dhexdooda ah ayaa sababayay amni -darro iyo hubsiimo -la'aan taasoo noqotay xaqiiqo aan la rabin nolosheenna. Taasi waa sababta aan aad u aaminsanahay in nabadda iyo horumarku ay yihiin laba dhinac oo isku qadaadiic ah. Mid waa mid aan macno lahayn tan kale; midna lama gaadhi karo kan kale mooyaane.
Waxbarashadu waa qodobka ugu muhiimsan dhaqanka nabadda
Waxyaabaha muhiimka u ah dhisidda dhaqanka nabadda waa waxbarashada. Waxbarashada nabaddu waxay u baahan tahay in laga aqbalo dhammaan qaybaha adduunka, dhammaan bulshooyinka iyo waddammada iyada oo ah qodob muhiim u ah abuurista dhaqanka nabadda.
Da'yarta maanta waxay u qalmaan waxbarasho aad u kala duwan-"mid aan ku ammaaneen dagaalka laakiin wax ku bara nabadda, rabshadaha iyo iskaashiga caalamiga ah." Waxay u baahan yihiin xirfado iyo aqoon ay ku abuuraan kuna kobciyaan nabadda naftooda shaqsiyeed iyo sidoo kale dunida ay ka tirsan yihiin.
Sida Maria Montessori ay si habboon u qeexday, “Kuwa doonaya hab nololeed rabshad leh, u diyaari dhallinyarada taas; laakiin kuwa nabadda doonaya waxay dayaceen carruurtooda yaryar iyo kuwa qaangaarka ah sidaasna uma awoodaan inay u abaabulaan nabadda. ”
Waxaa si isa soo taraysa loo xaqiijinayaa in xooga la saaro barashada garashada ee dugsiyada iyada oo la eegayo horumarinta dhinacyada shucuurta, bulshada, akhlaaqda iyo bani'aadamnimada in ay ahayd khalad qaali ah.
Xoghayaha Guud ee Qaramada Midoobay Ban Ki-moon ayaa ka sheegay Madashii ugu horreysay ee heerka Sare ee Dhaqanka Nabadda ee 2012-kii “…. Waxaan halkan u joognaa inaan ka hadalno sidii loo abuuri lahaa dhaqankan nabadda. Waxaan haystaa jawaab fudud, hal eray ah: waxbarasho. Waxbarasho ahaan, waxaan barnaa carruurta inaysan nicin. Iyada oo loo marayo waxbarashada, waxaan kor u qaadnaa hoggaamiyeyaal ku shaqeeya xigmad iyo naxariis. Waxbarasho ahaan, waxaan dhidibada u taagnaa dhaqan dhab ah oo waara oo nabadeed. ”
Xaaladdan dhexdeeda, waxaan ku ammaanayaa hindisaha Jaamacadda Soka ee Ameerika oo ku taal meel u dhow Los Angeles si ay u bilowdo sannad-sannadeedka 2014-ka “Wadahadalka Dhaqanka Nabadda iyo Rabshadaha La’aanta” oo ah gole wax-garad oo madax-bannaan, aan eex lahayn, eexna lahayn. waddooyinka iyo jihada loogu biiriyo dhaqanka nabadda iyo rabshad-la'aanta dhammaan dhinacyada khibradda waxbarasho.
Sidii aan hoosta uga xarriiqay shirkii ay martigelisay Codsiga Nabadda ee Hague ee "Waxbaridda ku wajahan duni aan rabshado ka jirin" oo ka dhacday Albania 2004, "ka-qaybgalka dhallinyarada ee howshan aad ayey muhiim u tahay. Wax-soo-saarkooda marka la eego fikradahooda u gaarka ah ee ku saabsan sida la isaga kaashan karo midba midka kale si looga takhaluso rabshadaha ka dhex dhaca bulshooyinkayaga waa in si buuxda loo tixgeliyaa. ”
Waxbarashada nabaddu waxay ka waxtar iyo macno badan tahay marka la qaato sida waafaqsan duruufaha bulshada iyo dhaqanka iyo baahida iyo rabitaanka dalka. Waa in lagu hodmiyaa qiimaheeda dhaqan iyo ruuxeed oo ay la socdaan qiyamka aadanaha ee caalamiga ah.
Sidoo kale waa inay noqotaa mid ku habboon caalamka. Ajendaha Hague ee Nabadda iyo Caddaaladda wuxuu si sax ah u xoojinayaa “… dhaqanka nabadda waxaa la gaari doonaa marka muwaadiniinta adduunka ay fahmaan dhibaatooyinka caalamka; leeyihiin xirfado lagu xaliyo khilaafaadka si wax ku ool ah; ogaadaan kuna noolaadaan heerarka caalamiga ah ee xuquuqda aadanaha, jinsiga iyo sinnaanta jinsiyadda; qadarin kala duwanaanshaha dhaqanka; oo xushmee daacadnimada Dhulka. ”
Xaqiiqdii, tan waa in si habboon loogu yeeraa "waxbarashada dhalashada adduunka". Barashada noocan oo kale ah laguma guuleysan karo hadaan si fiican looga fiirsan, loo joogteyn, iyo nidaam waxbarasho oo nabadeed oo horseeda wadada dhaqanka nabada.
Ujeeddada aasaasiga ah ee Xoghayaha Guud ee Qaramada Midoobay ee Waxbarashada Caalamiga ah waa in lagu dhiirrigeliyo muwaadinnimada adduunka inay tahay ujeeddada ugu weyn ee waxbarashada. Isku xirka doorka shakhsiyaadka iyo ujeedooyinka guud ee caalamiga ah, Dr. Martin Luther King Junior wuxuu cadeeyay in "Shakhsigu uusan bilaabin inuu noolaado ilaa uu ka kici karo xadadka cidhiidhiga ah ee walwalka shaqsiyadeed ee khuseeya dareenka guud ee aadanaha oo dhan."
Aan ku soo gunaanado anigoo ku adkaynaya in dhaqanka nabadda loo rogo dhaqdhaqaaq caalami ah, oo caalami ah, asaas ahaan waxa loo baahan yahay waa in qof kasta oo inaga mid ahi uu noqdo rumayste run ah oo nabad iyo rabshad la'aan ah, oo uu ku dhaqmo waxaan sheeganno.
Hadday tahay munaasabadaha sida Goleyaasha Heerka Sare ee sannadlaha ah, meelaha cibaadada, dugsiyada ama guryaheena, wax badan ayaa lagu gaari karaa kor u qaadista dhaqanka nabadda iyada oo loo marayo go'aan shakhsiyeed iyo ficil. Nabadda iyo rabshaduhu waa inay qayb ka noqdaan jiritaankeena maalinlaha ah. Kani waa habka kaliya ee aan ku gaari karno nabad iyo cadaalad waarta oo adduunka ah.
Qaybta Koowaad waxay noqon kartaa halkan ka akhriso.
# waxbarashada dhalashada aduunka
# horumar waara
Sarkaalka Isuduwidda Mashruuca: Machadka Mahatma Gandhi ee Waxbarashada Nabadda iyo Horumarka Waara (MGIEP)
Wadashaqeynta Manhajka Dugsiga Sare ee ICNC
Qoryaha Ma ahan Xalka Rabshadaha Ku Salaysan Jinsiga (warqada booska PJSA)
October 5, 2015 Siyaasadda 0
Waxaa soo saaray Ururka Daraasaadka Nabadda iyo Caddaaladda, oo ay qoreen Heidi Huse, Ph.D., iyo Laura Finley, Ph.D. Ururka Daraasaadka Nabadda iyo Caddaaladda (PJSA), isaga oo ilaalinaya himiladiisa iyo qiyamkiisa, waa laga soo horjeedaa [sii wad akhriska…]
Ka warbixinta iyo Waxqabadka lagu taliyay ee Symposia ee "Xuquuqda Haweenka ee Sharafta, Amniga iyo Cadaalada: Burburka Rana Plaza iyo Dabka Saddexagalka: Cawaaqibta iyo La Xisaabtanka"
April 15, 2015 Warbixinnada Waxqabadka 0
Xuquuqda Haweenka ee Sharafta, Amniga iyo Cadaaladda Rana Plaza Burburka iyo Dabka Saddex-xagalka: Cawaaqibta iyo La Xisaabtanka hoosta cinwaanka kore dood cilmiyeed loo abaabulay sidii dhacdo bulsheed oo barbar socota [sii wad akhriska…]
UNESCO Waxaa Lagu Dhiiri Galiyay Inay Xooga Saarto Waxbarashada Farsamada iyo Xirfadaha Dhaqanka Nabada (Saint Kitts iyo Nevis)
November 25, 2015 Warbixinnada Waxqabadka 0
(Maqaalka asalka ah: sknvibes.com, Nofeembar 9, 2015) St. Kitts iyo Nevis 'Raiisel wasaare kuxigeenka ahna Wasiirka Waxbarashada iyo Arimaha UNESCO, mudane Shawn Richards wuxuu ahaa u dooda xoojinta farsamada [sii wad akhriska…]